I-Rhodesian Ridgeback: Amaqiniso ayi-10 Mayelana ne-Afrika Inja Yengonyama - Izinhlobo
I-Rhodesian Ridgeback: Amaqiniso ayi-10 Mayelana ne-Afrika Inja Yengonyama
I-Rhodesian Ridgeback iyinhlobo enkulu yezinja ethwele umlando ongahlukile futhi odumile ngenxa yokubandakanyeka kwabo nelinye lamakati amakhulu emhlabeni, ingonyama.
Kukhona nokuningi okuhlangana neso uma kukhulunywa ngokubukeka kwabo kweRidgeback okudume ngokulingana nokuthi lokhu kukhethelwa kanjani ngokukhetha.
Ama-Ridgebacks aqala ukukhanga ngokushesha njengabangane bomndeni phesheya kwe-USA. Ngakho-ke sinqume ukuqoqa amaqiniso wethu ayishumi ayintandokazi ngalolu hlobo ukuze i-fanbase yabo ekhulayo ikwazi kangcono ngalenja enkulu futhi engeyona eyesabekayo!
10. Wayaziwa “Njengengonyama Yase-Afrika” ngonyaka we-1922
9. Uqale Wazalelwa ENingizimu Rhodesia
8. IRhodesian Ridgeback Is Aight Hound
7. Unemibala emithathu eyamukelekayo yejazi
6. I-Ridgeback Yakhe Ibalulekile Emibukisweni / Emincintiswaneni
5. Ukubukeka Kwe-Ridgeback Kungenxa Yezakhi zofuzo Eziyinhloko ze-Autosomal
4. AmaRidgebacks eRhodesian Aphakeme Kakhulu
3. Unamandla Nenkani
2. Abaningi Bahlushwa Izinkinga Zempilo Ezihlobene Nendlala yegilo
1. Izidingo zeRhodesian Ridgeback 2 Hours of Exercise / Daily
Ngo-1922, ngenkathi kudalwa uhlobo lokuqala lweRhodesian Ridgebacks nguFrancis R. Barnes, le nja yaziwa ngokuthi “yiRhodesian Lion Dog”. Kwaze kwaba ngo-1927 lapho iNgonyama Inja yaziwa ngokusemthethweni njenge- 'Rhodesian Ridgeback'.
Noma kunjalo, igama labo ushintsho lwaholela abaningi ekubuzeni ukuthi kungani babaziwa ngokuthi 'izinja zezingonyama' ngekhulu lama-20?
Kuyiphutha ngabaningi ukuthi iRhodesian Ridgeback yaba neqhaza ekuzingeleni nasekubulaweni kwamabhubesi.
Lokhu kwakungenxa yendima yabo njengezinja zokuzingela. Amabhunu ayedinga ukuthola umlingani we-canine okwaziyo ukuzingela inyamazane enkulu. Isizathu sokuthi ekuqaleni bazalelwa abazingeli bamabhunu kwakuwumsebenzi wokugcina amabhubesi ebazingeli.
Lezi zinja zazizungeza amabhubesi futhi ziwaqaphe kuze kufike abazingeli. Futhi zazisiza ekuvikeleni abazingeli emabhubesini.
Ukuxwayisa kwabo, ukuhlakanipha, ukuzethemba kanye nosayizi omkhulu kusizekile kulokhu kuzala kwamandla okwenza ezimeni ezicindezelayo lapho izinja ezincane noma ezithobekile zingafanelekile.
Namuhla, izikhathi sezishintshile, iRhodesian Ridgeback manje isiyakhiwe njenge- umngane oqotho . Uthando lwabo, ukwethembeka, ukuzethemba kwabo nobuhlakani babo nakanjani benza kahle njengesilwane somndeni.
IRhodesian Ridgeback idabuka eNingizimu Afrika . Eqinisweni, ekuqaleni bazalelwa endaweni eyaziwa ngokuthi yi “Southern Rhodesia” - manje ebizwa ngeZimbabwe.
Yize iqhamuka eningizimu ye-Afrika, iRhodesian Ridgeback manje seyigcwele ezinye izinhlobo eziningi ezingezona ezomdabu ( isb. ISchnauzer encane neRottweiler ) eSeningizimu ne-Afrika - lokhu kuyinto ejwayelekile emhlabeni wonke ngezinja eziningi zomdabu.
Kuyamukelwa kahle ukuthi ngekhulu le-18, abaseYurophu bafika eNingizimu Afrika futhi baqala ukuhweba nabantu base-Afrika abangamaKhoikhoi. AbaseYurophu baqala ukubabaza ukwethembeka, ukuzethemba kanye nokugadwa komhlobo wezinja zamaKhoikhoi.
Ngokushesha okukhulu, abaseYurophu baqala ukuzala izinja zabo ngohlanga lwamaKhoikhoi; lokhu kwaholela ekwakhiweni kokhokho baseRhodesian Ridgeback.
Kunzima ukukhomba ukuthi iziphi izinhlobo ezaqala ukukhiqizwa ukudala iRidgeback. Kodwa-ke, kuyaziwa ukuthi inja yamaKhoikhoi, amaGreyhounds, amaBulldogs, Ama-Terriers futhi kwasetshenziswa namaGreat Great.
Ama-Rhidgeian Ridgebacks ayisithupha aqala ukulethwa e-United States ngawo-1950 ngabakwa-O'Briens ngethemba lokuletha le nja eMelika ngeAmerican Kennel Club.
Lokhu kube yimpumelelo futhi ngo-1955 lolu hlobo lwaqashelwa ngokusemthethweni yi-American Kennel Club .
Ihlukaniswe njenge-hound yi-American Kennel Club, iRhodesian Ridgeback iyindawo yokubona. I-United Kennel Club ibuye ihlukanise lolu hlobo njenge 'hound sight'. Kodwa-ke, lokhu bekungenjalo ngaso sonke isikhathi.
Kuze kube ngawo-1950, iRidgeback yayihlukaniswa njengengxenye yezinhlobo “zezinja”. Okwabo ukuhlukaniswa okusemthethweni yavuselelwa ngeminyaka yama-1960 isuka 'enjeni yesibhamu' yaya ku- 'hound'.
Inja yesibhamu ichazwa njengamalungu e-canine asiza abazingeli ukulandelela phansi nokubuyisa umdlalo omncane. Izinja zezibhamu ezidumile, ezaziwa kabanzi emhlabeni wonke, zifaka: Ukubuyisa kweLabrador , IGolden Retrievers neCocker Spaniels.
Ukushayela iRhodesian Ridgeback inja yesibhamu akulungile ngezindinganiso zethu zamanje.
Le nja ayenzi imisebenzi yenja yezibhamu. Umsebenzi wabo ukugcina ibhubesi likhona kuze kufike umzingeli. Ngakho-ke, amakilabhu amaningi e-kennel aphinde ahlukanisa njenge- 'hound sight' noma kwesinye isikhathi 'scenthounds'.
Le nja kufanele ibe nejazi elifushane, elicwebezelayo nelinakekelwa kahle. Lapho zigcinwa kahle, ijazi lazo liminyene kakhulu elisiza ekuvikeleni isikhumba sabo ngesikhathi sokuzingela.
Imibala yejazi eyamukelekayo yeRhodesian Ridgeback iyi Kunqunyelwe kumithunzi emithathu ehlukene kakolweni :
IRhodesian Ridgeback yayijwayele ukuza ngemibala ehlukahlukene efana nesable kanye ne-brindle . Izinga loqobo lohlobo lokuzalwa livunyelwe ukwamukelwa kokuhlukahluka okukhulu kombala wejazi. Kodwa-ke, indinganiso yakamuva ikhawulele umbala wejazi emathunzini kakolweni kuphela.
IRhodesian Ridgebacks nayo ingahle ifike ngemibala emibili yamakhala ehlukene: emnyama noma nsundu. Bayaziwa futhi ukuthi banezilimi ezimnyama ( njengeChow Chows ).
Esinye isici esithakazelisayo sokubonakala kwale nja ukwamukelwa kokumakwa okunemibala.
Ezinhlotsheni eziningi ezinkulu zezinja, ukumakwa okumhlophe noma ukhilimu noma yikuphi emzimbeni wabo kuvame ukubhekwa njengephutha (is.yaziwa njengesizathu sokungavunyelwa). Kodwa-ke, eRhodesian Ridgeback, noma yiziphi izinsimbi ezimhlophe noma ukhilimu zamukelwa kabanzi. Izisekelo zokumnyama noma ezimpunga nazo zamukelwa, yize kungengenani eliningi ngokweqile.
I-American Kennel Club ibona ukungabi nabuganga njengephutha elinzima kulolu hlobo (isb. Isizathu sokungavunyelwa) okwenza ukubukeka kwabo kwe-ridgeback kube yingxenye ebalulekile yaleli zinga lezinhlobo. Ukulandela, amakilabhu amaningi wezinja emhlabeni wonke abuye abona ukungabi nalutho komhlobo njengephutha.
Amanye amakilabhu ekennel ahambele phambili afuna ukubulala imidlwane yeRidgeless (isb. iKennel Club yase-United Kingdom ethi Kuzokhishwa imidlwane engenamikhono).
Kodwa-ke, ngenxa yokwanda kwabo ekubuzweni kwe- izindlela zokuziphatha zomfuyi . Ukudonsa imidlwane enempilo kepha engenamigogodla kuthathwe njengokungamukeleki.
Ukuhlalwa kwemidlwane engenamigogodla akwamukelwa njengendlela yokulawula amaphutha ezimonyo ngaphakathi kohlobo. Muva nje, kusetshenziswa izindlela zokuphalaza noma zokuthwebula imidlwane.
Umqolo odumile uchazwa kangcono njengomugqa omude woboya olandela umgogodla wabo. Uboya kuleli phethini elihlukile bukhula buqonde kolunye uhlangothi lwejazi labo ngakho-ke lakha umqolo.
Njengokubonakala okuningi okuhlukile, 'i-ridgeback' yabo itholwe ngenxa yezakhi ezithile zofuzo . Kuphakanyisiwe ukuthi isici se-ridgeback singenxa ye- izakhi zofuzo ezibusayo .
I-canine enohlobo olulodwa noma ezimbili zofuzo eziguquliwe izoba nommango.
Kodwa-ke, lapho inja inamakhophi amabili we-ridge allele, iba sengozini enkulu yokuthola ukukhubazeka kwe-neural tube ( njengeDermoid Sinus ). Lokhu kuyinkinga kubafuyi bezinja lapho becubungula ukufunwa kwesici se 'ridge' nokuthi imidlwane engenamigogodla ayithandeki kangako.
Ezinye izinhlobo ezithwala leyo mikhuba efanayo zifaka phakathi iThailand Ridgeback, kanti iPhu Quoc Ridgeback zombili zithambekele ekukhubazekeni kwamathambo e-neural uma ziphethe amakhophi amabili aguqukile.
Yize kunombono oyiphutha odumile, abanikazi beRhodesian Ridgeback bayakwazi lokho lolu hlobo alunalo ulaka . Eqinisweni, zizwela kakhulu. Yile mfanelo ebenza babe umngane omuhle wabathandi bezinja abasebenzisa ukunikela ngesikhathi sabo nomzamo wabo kule nja enhle.
Ngeshwa, abaningi benza iphutha lokuthi 'ukuzihlukanisa' kohlobo olubhekiswe kubantu ongabazi nolaka. Ukubukeka kwabo okusabisayo kungaphinde kugxekwe ngenxa yobukhulu babo obukhulu futhi:
Abesilisa baseRhodesian Ridgebacks bangafika kubude obungamasentimitha angama-25 kuye kwangama-31, kanti abesifazane bame ngamayintshi angama-24 kuye kwangama-30
Kokubili abesilisa nabesifazane banesisindo esingamakhilogremu asindayo angama-88 kuye kwayi-110
Nge ukuxhumana nomphakathi okulungile imikhuba esemncane, ubudlova akufanele neze bube yinto evelele eRhodesian Ridgeback. Ukuhlalisana nabantu kuzokusiza ukuthi ukhuthaze okuhlangenwe nakho okuhle ukusiza le nja ukuthi izivumelanise nendima yabo yokuzingela kanye nomnakekeli, ukugoqa eceleni kwakho.
Ngenxa yobukhulu bazo obukhulu nokuziphatha okudlala, bangashayisa ngengozi izingane ezincane ngesikhathi sokudlala. Ngakho-ke, asikutusi lolu hlobo lwemindeni enezingane ezincane futhi ukugadwa kuyanconywa.
Ngokwengeziwe, bane-drive eqinile yezilwane ngenxa yemvelo yabo yokuzingela. Akuvamisile ukuthi kunconywe eduze kwezilwane ezingumngane omncane ezifana namakati noma onogwaja. Kodwa-ke, ngokuhlangana okuqhubekayo nokufanele nokunakekelwa, ubunye phakathi kokuphela koboya bungaba khona - empeleni nihlalisane kahle namakati endlini yabo.
Imvelo yabo yokuzivikela akufanele ididaniswe nolaka
IRhodesian Ridgeback yaziwa njengenja eqinile futhi enenkani. Bangaba nemikhuba emibi njengemidlwane futhi baziwa ngokuzama futhi 'ukugoba imithetho' kaningi kunalokho. Lokhu kunga yenza ukuqeqeshwa kanzima kancane. Kodwa-ke, ngokuqeqeshwa okungaguquguquki nokunembile, lolu hlobo lusalalela kakhulu.
Ziyizinhlobo ezihlakaniphile zezinja , nokho, lokhu akusho ukuthi bangabajabulisi abakhulu. Ngakho-ke, sincoma lolu hlobo kubanikazi abanolwazi kuphela. Ukuqeqeshwa okungaguquguquki nokuqhubekayo kubalulekile kuRhodesian Ridgeback.
Ubungcweti buhamba ibanga elide ekuqeqeshweni kwezinja, noma ngabe kunzima kangakanani ukuzala. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi eRhodesian Ridgeback enonya. Eqinisweni, uFrancis R. Barnes (indoda edale ifayela le- izinga lokuzala lokuqala ) wasibona isidingo somusa nokwethembela ngale nja.
Ubhale wathi: 'Ukuphathwa ngonya ... akufanele nanini kuphathwe lezi zinja ... zihamba zibe izicucu ngokuphathwa kwalolo hlobo'.
Izindlela zokuqinisa ezikahle ngakho-ke kuyindlela engcono kakhulu yokuqeqesha ukusiza ukufundisa iRhodesian Ridgeback yakho. Namathela ekuphathweni, kumathoyizi nasekudumiseni kuphela.
Lolu wuhlobo lwenja oluzethembayo, futhi abesabi ukuvikela abanikazi balo uma becabanga ukuthi kunesidingo. Ngakho-ke, kugcizelelwa isidingo somnikazi onolwazi ongafundisa le nja ngoqeqesho olungaguquguquki nolulungile kanye nomphakathi.
Ngokunakekelwa okuningi nothando, iRhodesian Ridgeback inesikhathi eside sokuphila se- phakathi kweminyaka eyishumi kuya kwengu-12 . Lokhu empeleni kumdala impela ngohlobo lwesayizi yabo!
Ngeshwa, njengezinja eziningi ezihlanzekile, iRhodesian Ridgeback ithambekele ekutholeni izindaba ezithile zezempilo. Zingezinye zezinhlobo eziphezulu ezihlushwa yizinkinga zezempilo ezihlobene nendlala, ezingena kunombolo 12 ngokusho kwe- I-Orthopedic Foundation Yezilwane .
I-Hypothyroidism ingesinye sezimo zezempilo ezivame kakhulu etholakala kule nja. Ichazwe njengokungasebenzi kwe-gland yegilo, kuholela ekukhiqizeni okwehlisiwe nasekukhululweni kwamahomoni wegilo. Izimpawu zingafaka ubuthakathaka, ukuzuza kwesisindo, ukulahleka koboya, ukutheleleka kwesikhumba, nokungasebenzi.
Uma ubona ushintsho oluphawulekayo ekuziphatheni kwesilwane sakho, khona-ke kuyalulekwa ukuba ushayele udokotela wezilwane wangakini khona manjalo.
Ukwelashwa ye-hypothyroidism iyaqhubeka futhi imvamisa ihlala isikhathi sokuphila kwayo konke. Kodwa-ke, ikhwalithi yempilo yomdlwane wakho akufanele ithinteke inqobo nje uma inkambo efanele yezenzo zokwelashwa ithathwa khona lapho.
Uhlobo oluqinile lwemisipha ludinga ukuzivocavoca nsuku zonke ukuzigcina zivuselelekile! Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi uma bengamazinyane amancane, bayathanda ukudlala futhi bayasebenza kakhulu (esinye isizathu sokuthi kungani badinga isikhathi esiningi nokunakwa kubanikazi babo).
Sincoma ukuhlinzeka iRhodesian Ridgeback ihora elilodwa noma amabili lokuzivocavoca umzimba ngosuku.
Lolu wuhlobo olufanele ikhaya elinamagceke amakhulu ngemuva lokho kubiyelwe futhi kubavumela ukuba bagijime badlale ngokukhululeka usuku lonke.
Ukuvivinya umzimba akuyona kuphela uhlobo lokuvivinya umzimba lolu hlobo ludinga. Ukuzivocavoca ngokomqondo i-canine yakho kubaluleke njengokuyikhipha. Lokhu kusiza ekwehliseni isimilo esingesihle njenge ukukhala ngokweqile , ukukhonkotha nokuhlafuna.
Ukuvuselelwa kwengqondo inganikezwa kwiRhodesian Ridgeback yakho ngezindlela eziningi:
Isikhathi sokuqeqesha ngumhlinzeki omuhle kakhulu. Uma nje ugcina i-pup yakho igxilile futhi izinikele ezifundweni zokuqeqesha ngama-oodle okuphatha isikhathi esifushane.
Ukuzidela kwansuku zonke kuzosiza ukugcina umdlwane wakho uvuselelekile ngokwengqondo. Izinguquko ezinhlelweni zenhlalo nezemvelo, gcina inja yakho ihungwe emhlabeni obazungezile futhi ibavimbele ekubeni nesithukuthezi.
Isikhathi sokudlala siyindlela enhle yokuxhumana nokubopha inja yakho (iRhodesian Ridgeback ithanda isikhathi sokudlala). Mhlawumbe kuhle umdlalo wokulanda ungenza iqhinga?
Ngenxa yazo zombili izidingo zazo eziphakeme ngokomzimba nangokwengqondo, iRhodesian Ridgeback ayilona uhlobo olufanele lwabantu abamatasa noma abangasebenzi. Bazolwela ukuthola ukukhuthazeka abakufisayo ngokwemvelo.
Ngobunikazi obufanele, ukuzihlanganisa nabantu kanye nemikhuba yokuqeqesha, asikho isizathu sokuthi lolu hlobo lungakwazi ukuhlangana kahle nempilo yomndeni egcwele induduzo nothando.
I-Miniature Bulldog: Umhlahlandlela Ophelele We-Mini Bulldog
i-german Shepherd lab mix igcwele ngokugcwele
imidlwane yomalusi enezinwele ezinde
enkulu kangakanani i-chihuahuas ye-pomeranian